Ndụmọdụ maka iwere foto Obodo - LucidPix
Obodo nwere ike ịbụ nnukwu ebe iji ese foto, mana oge ụfọdụ ọ nwere ike isi ike ijide ezigbo ịma mma nke ntụgharị ihu igwe. Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka otu ị ga - esi see foto obodo kacha mma na nkọwa niile ịchọrọ ijide.
Nke 1: Jiri Tozọ Mee Uru Gị
Enwere ike iji okporo ụzọ obodo na-abụ usoro edoziri na foto gị. Usoro ndu bu ihe nlere nke ihe nlere iji mee ihe nlere anya n’otu isi ihe. Iji n'okporo ụzọ ma ọ bụ ụzọ ihu igwe nke obodo, nwere ike inye aka nye isiokwu ma ọ bụ ndabere nke foto gị mmetụta dị mma.
Nkeji 2: Nweta Anya Nnụnụ
Iburu mbara ala site n'okirikiri dị elu lere anya pụrụ inye aka mee ka onye lere ya anya mara ihe obodo dum na-ele. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-ele obodo anya site na ọkwa okporo ụzọ, ịhụ ya site na elu ebe dị elu nwere ike ime ka foto na-etinyekwu aka. Nnụnụ na-elele anya nnụnụ anya Okporo Lzọ Lombard na San Francisco gosipụtara onye na-ahụ ihe n’ezie ka oke ikuku dị.
Nkeji 3: Mee nwayọ
Onga ikpere ma were foto nke ụlọ toro elu site n’ala gbadaa nwere ike bụrụ foto na-atọ ụtọ n’ihi na ọ na-ekwusi ike ịdị elu ya. Nke a nwere ike inye onye na-ele gị anya ka ị lelee etu ụlọ ụfọdụ dị n’obodo ị na-ese.
Nkeji 4: Chọta Isi nke Mmiri
Ọtụtụ obodo dị nso na mmiri, ma mmiri ndị a nwere ike itinye mmetụ na-atọ ụtọ karịa foto gị. Foto ị ga-eji see foto n’otu n’ime obodo nwekwara ike belata ihe ọ bụla na-adọpụ uche ndị ị nwere n’egede. I nwekwara ike were foto mmiri n’ofe mmiri n’abali na-ese ihe osise. Maka obodo dị n'ụsọ oké osimiri, njegharị njem ụgbọ mmiri na-akwụkarị ụgwọ maka nnabata, n'ihi na ha na-enye echiche maka obodo ị na-anaghị ahụkebe / can nwere ike ịgụ ọzọ ndụmọdụ na nka na blọọgụ anyị ọzọ.
Obodo bụ nnukwu ebe iji see ọmarịcha foto n'ihi ọmarịcha ebe dị egwu, ebe dị egwu, na oke ume. Oge ọzọ ị banyere n’ime obodo, were ụfọdụ foto ma gbanwee ha gaa foto 3D ịbụ zigara ndị otu Facebook anyị ka mmadu nile hu!
Echiche eserese nke oge 3D →← Ebe kachasị mma ị ga-eleta na France!